Root URB597 (546141-08-6) HPLC8698% | AASraw xakameyn doorasho
/ Products / Xabbad dufan leh / URB597
Rating: Category: Xabbad dufan leh Tags: iibso URB597, URB597, URB597 iibka, Adeegyada URB597
AASraw waxaa ku jira awoodda wax soo saar iyo karti wax-soo-saarka laga bilaabo gram ilaa nidaamka xajmiga ee URB597 (546141-08-6), iyadoo la raacayo nidaamka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo.
URB597, oo sidoo kale loo yaqaana KDS-4103, waa mid aad u awood badan oo doorbidaya difaaca fatit-amide hydrolase (FAAH), enzyme xayirisa hiddo-soo-saarka indoyannabinoid anandamide, oo leh qiimaha 50% xoojinta xakameynta IC50 ee 4.6 nM iyo 0.5 nM marka la eego xuubabka maskaxda maskaxda iyo microsomes-ka ee beerka. URB597 wuxuu muujiyaa walbahaarka, antidepressant, antinociceptive iyo saameynta xanuunka faafa ee vivo iyada oo aan laga soo bixin calaamadaha kale ee la xidhiidha xashiishada cannabinoid.
I.URB597 Tilmaamaha aasaasiga ah:
Nooca Molecular: C20H22N2O3
Miisaankani waa: 338.4
micne ah: N-Cyclohexylcarbamic acid 3 '- (aminocarbonyl) [1,1'-biphenyl] -3-yl ester; 3'-CarbaMoyl- [1,1'-biphenyl] -3-yl cyclohexylcarbaMate; 3- (3-carbaMoylphenyl) phenyl N-cyclohexylcarbaMate ; N-cyclohexyl-, 3 '- (aMinocarbonyl) [1,1'-biphenyl] -3-yl ester; KDS 4103 N-Cyclohexylcarbamic acid 3' - (aminocarbonyl) [1,1'-biphenyl] -3-yl ester ; N-Cyclohexylcarbamic acid 3 '- (aminocarbonyl) [1,1'-biphenyl] -3-yl ester URB 597 KDS 4103; URB 597,> = 98%; APD597 (URB597)
Dhibcaha Biyaha: 155-157 ° C
Alpha: D + 5 ° (c = 0.437 ee chloroform)
Xalka DMSO: Xaaqin 2mg / mL, cad cad (kuleyl)
II. Isticmaalka URB597 ee wareegga:
2.How waa shaqada URB597?
Muuqaalka: Dareen weyn oo kiliinik ah oo leh isticmaalka cannabinoid reseptor 1 (CB1) waa agonistayaasha tooska ah waa in xeryahanadan ay kordhiyaan cabbitaanka khamriga iyo dabeecadaha la xiriira tacadiyada daroogada. Sida hab kale, hawlaha CB1-dhexdhexaadiyaha waxaa lagu fududeyn karaa iyadoo la kordhinayo heerarka anandamide iyadoo la isticmaalayo kumbiyuutarka lafdhabarta amma hidde ah (FAAH). Ujeeddo: Isticmaalidda ciribtirka FAAH-ga ee doorka URB597, waxaan baaray haddii loo baahdo in la isticmaalo habka loo yaqaan 'cannabinoid' ah ee kor u kaca ah ee khamriga oo kordhiya masiibada alkahoosha, sida waxa ku dhacaya CB1 daaweenta tooska ah ee agagaaraha. Qalabka iyo hababka: URB597 waxaa lagu tijaabiyay is-maamulka aalkolada jiirka Wistar iyo cabitaanka khamri-cabbida qamriga ee sigaarka loo yaqaan Seljukiyiin Sardiiniyiin ah ee doorbidaya khamriga-doorbida (msP). In jiirka Wistar, saameynta URB597 ee ku saabsan welwelka alkahoosha iyo walbahaarka, yohimbine- iyo dib-u-celinta dib-u-cusboonaynta khamriga raadinta ayaa sidoo kale la qiimeeyay. Marka la barbardhigo, saamaynta CB1 rimonabant ka soo horjeeda rimonabant on ethanol is-maamulka ayaa sidoo kale la baaray. Natiijooyinka: Sida ku xusan xaaladaheena tijaabada ah, maamulka isdhexgalka ee IP-ga ee URB597 (0.0, 0.3 iyo 1.0 mg / kg) ma aysan kordhin khamriga cabitaanka khamriga ee xayawaanka msP iyo in ay fududeeyeen saamiga joogtada ah ee 1 iyo isku-dhafka khamriga ee xaddiga alkahoolka Wistars. Baaritaanada dib-u-cusboonaynta, maadadaas wax saameyn ah kuma yeelan cue-, diiqad-diiqad-iyo dib-u-dhac yohimbine. Taa beddelkeeda, URB597 waxay si buuxda u tirtirtay jawaabta anxiogenic ee la qiyaasay muddada ka-bixitaanka ka dib markii maamulka cabitaanka khamriga (3.0 g / kg). Rimonabant (0.0, 0.3, 1.0 iyo 3.0 mg / kg) ayaa si weyn hoos u dhigay is-maamulka isdhexgalka ee Ethanol. Gabagabo: Natiijooyinka waxay muujinayaan in dhaqdhaqaaqa nidaamka anandamide ee endocannabinoid ayadoo la xakameynayo xakameyn la'aanta FAAH aysan kor u qaadin halista khamriga ee laakinse waxay yareyneysaa welwelka la xidhiidha aalkolada. Sidaa awgeed waxaan ku ogaan karnaa in daaweynta ayadoo lagu saleynayo isticmaalka hababka isdifaacayaasha ee endocannabinoid sida URB597 laga yaabo inay bixiso faa'iido muhiim ah marka loo eego daaweynta calaamadaha tooska ah ee CB1.
3. Waxay saameysaa URB597?
Saamaynta URB 597 kali ahaan iyo isku-dhafka anandamide waxaa lagu baari jiray hal koox oo daanyeer ah (n = 4) kuwaas oo kala ah Δ9-THC (0.1 mg · kg-1 iv) gaari, iyo koox kale (n = 5) Δ9-THC (1 mg · kg-112 h-1) oo midabtakooray xashiishada cannabinoid ee rimonabant (1 mg · kg-1 iv).
URB 597 waxay xoojisay saameynta dhaqanka ee anandamide laakiin maahan kuwa kale ee CB1. Si kastaba ha ahaatee, URB 597 si aad ah uma wanaajineynin in la joojiyo joojinta Δ9-THC joojinta ay sababtay anandamide. Wadar ahaan, xogtaasi waxay soo jeedinayaan in maskax-wareerka maskaxda ah ee maskaxdu aysan si sahal ah u dhaqmin saameynta dabeecadda ee anandamide oo aan si xor ah loo maamulin.
Xakamaynta ambalaanska amase lafdhabarta (FAAH) ee korantada (FAAH) (qiimaha IC50 waa 3 iyo 5 nM ee beerka iyo maskaxda bini-aadamka, siday u kala horreeyaan). Waxay muujineysaa waxqabadyo muhiim ah oo ka dhan ah noocyada soo dhaweynta, kanaalada ion iyo enzymes, oo ay ku jiraan reseptors bini'aadamka iyo lakto monoacylglycerol. Wuxuu muujiyaa dhaqdhaqaaqa antiallodynic iyo antihypergesic ee jiritaanka xanuunka xanuunka. In vitro, KDS-4103 wuxuu joojiyaa dhaqdhaqaaqa FAAH oo leh xajmiga dhexdhexaadka ah (IC (50)) ee 5 nM ee xuubka maskaxda iyo 3 nM ee microsomes ee beeraha. In vivo, KDS-4103 wuxuu joojiyaa dhaqdhaqaaqa maskaxda FAAH-da ka dib markii daaweynta intraperitoneal (IP) la qaato qiyaasta dhexdhexaadiyaha dhexdhexaadka ah (ID (50)) ee 0.15 mg / kg. Xaruntu si weyn uguma dhexgalin bartilmaameedyada kale ee cannabinoid, oo ay ku jiraan reseptors cannabinoid iyo gaadiidka anandamide, ama leh tiro balaadhan oo ka mid ah duuliyeyaasha, kanalka ion, gaadiidka iyo enzymes. Cilmi-baaris xagga jiirka ah iyo jiirarka KDS-4103 waxay ka tarjumaysaa mid muhiim ah, cabsida la midka ah, daawada antidepressant-ka iyo saameynaha, kuwaas oo looga hortago daaweynta CB1 antagonists. Taas bedelkeeda, qiyaasta daawada si weyn u xakameysa dhaqdhaqaaqa FAAH iyo in si weyn loo kordhiyo heerarka maskaxda ee anandamide, KDS-4103 maaha wax ka soo saari kara saameynta cannabinoid-ciladaha (tusaale ahaan, catalepsy, hypothermia, hyperfagia), ma keenayso doorbidaan, saameynta kala-takoorka ee walxaha firfircoon ee cannabis, Delta9-tetrahydrocannabinol (Delta9-THC). Natiijooyinkaasi waxay soo jeedinayaan in KDS-4103 ay ku dhaqmayso iyada oo kor u qaadeysa tallaabooyinka tonic ee anandamide ee hoos-u-dhaca ah CB (1), oo caadiyan ku lug leh xakameynta dareenka iyo xanuunka. KDS-4103 waxaa laga heli karaa afka iyo jinka cynomolgus. Daraasadaha qiyaasta ee soo noqnoqda ee soo noqnoqda (1,500 mg / kg, per os) labadan nooc ee aan soo bandhigin qulqulka jiritaanka. Sidoo kale, suntan laguma xusin baadhitaanada cytotoxicity ee baaritaanka vitamin iyo baaritaanka Ames. Waxaa intaa dheer, ma jiraan wax cillado ah oo lagu arkay jiirka on baararka rotarod ka dib markii daaweynta degdega ah ee IP la KDS-4103 ee qiyaasta ilaa 5 mg / kg ama fiilo indho-indhayn oo farsamo leh ka dib markii la qaato dawada afka ilaa xNUMX mg / kg. Natiijooyinka waxay soo jeedinayaan in KDS-1,500 ay bixin doonto hab cusub oo leh daaqad lagu daweyn karo daaweynta walwalka, niyad-jabka iyo xanuunka.
6. URB597 Cunnooyin:
7. Suuq-geynta URB597:
IV. Sida loo iibsado URB597 ka soo AASraw?
Noqo midka ugu horreeya ee dib u eega "URB597" Cancel reply
Rimonabant budada HCL